ikhaya » 2017 NAB Bonisa » Iingxelo zoLondolozo kwi-2017 NAB Show
Iingxelo zoLondolozo kwi-2017 NAB Show
Kwi 2017 I-NAB ibonisa, Iinkampani ezinika izicwangciso ze-digital archiving zivelele kwimiboniso nakwiprogram yenkomfa. Kwixesha elidlulileyo, umxholo wezobugcisa kunye nomxholo woononophelo wawugcinwe kwi-movie okanye i-analog videotapes. Namhlanje ukhetho olukhoyo kwi-media media ukugcina umxholo wedijithali luxhomekeke kwizinto ezikhethiweyo kunye neziseko ezikhoyo zeendawo zokugcina izitoreji.
Ucwaningo lwe-2016 Media kunye nezoLonwabo kwi-digital storage eqhutywe yiCoughlin Associates i-Magnetic tape yimidiya ye-archive elandelwayo, elandelwa ngama-HDD kunye nokugcinwa kwenethiwekhi (mhlawumbi kuya kuba ne-HDD) njengoko kuboniswe ngezantsi. Kwakhona abathathi-nxaxheba bathengisa ukuba babenokwenza indawo yokugcina iifayile efini. Kwicandelo lethu uphando lwe-38.1% luthi baya kusebenzisa ifizi yabucala okanye yoluntu ukugcinwa kwirekhodi kwi-2016 nangona kuphela i-2% okwamanje igcinwa kwii-archives zayo kwi-private or cloud. Akungabazeki ukuba i-AWS, i-Google kunye ne-Microsoft izakusebenzela ukunyusa indima yelifu kwindawo yokugcinwa kwengqolowa.
Qaphela ukuba uphando lweendaba ze-2017 nophando lononophelo oluthabathekileyo lusathatha inxaxheba. Imisebenzi yezoLuntu nezoLonwabo inokuthatha inxaxheba ngokusebenzisa le link: Www.surveymonkey.com/r/FPRW6Y5
Makhe sijonge ezinye zezicwangciso zokugcina izitoreji zokugcina izithuthi kwi-2017 I-NAB ibonisa.
I-XenData ikhulule iinkqubo zayo zeFX-series ezidibanisa ukugcinwa kwedisk ekwabelwana kunye nokugcinwa kwirekhodi kwi-server eyodwa. Umncedisi womntu wonkqonkqo uncedisa ngokulula ukwenza imveliso yokusebenza yemveliso yemidiya, ngenkathi unikela ngemilinganiselo emibini yokugcinwa ngokuzimeleyo: umthamo ophezulu olwabiwo lwe disk, ofanelekileyo kwimisebenzi yokusebenza ye-4K, kunye nomqulu wokugcina ulwazi okwazi ukuxhasa ilayibrari ye-LTO enamathelekileyo, i-Optical ehlanganisiweyo Ilayibrari yeDivaysi yeDivaysi okanye iMicrosoft Azure isitoreji sefu Ngokunikezela iincwadi ezimbini eziphezulu ezixhasayo, umncedisi weFX angenza lula umsebenzi osebenzayo njengoko ugweba imida yokugcinwa eyayiza kuba yile disk ekwabelwana ngayo okanye kwi-volume storage storage.
I-QuantumI-StorNext 6 idibanisa ukusebenza okuphezulu kunye nokuphathwa kwedatha eziphambili kunye nenkqubo yefayile yayo esetyenziswa kakhulu kunye nesicwangciso sokulawula idatha. Ezi mpawu zolawulo lweedatha zibandakanya i-FlexSync (ukulungelelaniswa kokuqukethwe okuqhubekayo), i-FlexSpace (i-multi-geo egcinwe kuyo) kunye neFlexTier Ukuhlaziya kwakhona kwenza ukuba umgangatho osekelwe kumxhasi weenkonzo uquke umgca wendlela yokuhamba, ukugcinwa kwamanqwanqwa. Kuya kufumaneka kwakhona kubaxhasi be-SAN kunye ne-DLC kunye nenkxaso ye-API yenkonzo yewebhu.
I-XenData yeFayile yamaFayili Gateway ilawula inkqubo enye yefayile etshabalalayo kwiindawo ezimbini zokugcina: kwi-RAID kunye ne-Microsoft Azure blob storage. Inkqubo yokugcina ivumela izicelo ezikhoyo kwiifayile ukuba zisebenzise isitoreji sefu ngaphandle kwesidingo sokuguqulwa. Imigaqo-nkqubo yokubophelela igcina iifayile ezifikelelwa rhoqo kwindawo yokugcinwa kwendawo, eyanciphisa iindleko zokufikelela kwefayili kunye nokusetyenziswa kwebhanqa kwi-Intanethi.
I-Western Digital yazisa ukuba HGST I-System Archive esebenzayo, owokuqala kwintsapho yemveliso ukufaka i-ActiveScale P100 kunye ne-X100, incedaÉcole Polytechnique Fédérale de Lausanne(EPFL) ukugcina ingqalelo kwiiyure ze-17,000 zeemidlalo eziphilayo, ividyo, kunye nedatha evela kwi-Festival ye-Montreux Jazz ukuze ujonge ngokukhawuleza, ukufunda kunye nokudibanisa nomxholo ngokuzayo. Ukuguqulwa ukusuka kwipayipi ukuya kufomathi yedijithali kwaye igcinwe kuyo HGST I-System Archive esebenzayo, imisebenzi kunye neenkcukacha ezixhasayo zifumaneka lula kwixesha langempela kunye nezidingo, ukususa izithintelo zomzimba kunye nezobuchwepheshe, kwaye kubangele uphando olunzulu nophuculo lomsebenzi kwi-EPFL.
Njengenxalenye yeIprojekthi yeMonreux Jazz Digital, I HGST I-Active Archive System igcina kwaye ihambisa ividiyo ekhompyutheni kunye nokurekhoda komsindo kwiintlobo zamaakhonsathi abuyele kwi-1967. Iirekhodi ze-18 ifomathi ezahlukeneyo zeendaba ezazisetyenziselwa ukuthatha iiyure ze-11,000 zevidiyo kunye neeyure ze-6,000 zomsindo ezivela kwiikhompi ze-5,000. I-archive yiyona nto iqokelele kakhulu imifanekiso yomculo ephilileyo eyadalwa kwaye iqukethe imisebenzi yeklasi evela kuMarvin Gaye, uElla Fitzgerald, uBob King, uJohnny Cash, Purple Deep, u-Eric Clapton, kunye nokunye, bonke abaye benza kwiMidlalo ye-Montreux Jazz. Ngokuqaphela iminyaka yayo ye-50 yomculo kunye ne-video archiving, ukuqokelela kwafakwa kwi-UNESCO yeNkumbulo Yehlabathi kwi-2013.
I-StorageDNA yamemezela oku kulandelayo I-NAB ibonisa:
I-DNAevolution 4.0, inguqulelo ye-software yakutsha ye-LTO ye-LTO ye-OLFS ye-archive engine,Elenzelwe ukukhawulezisa i-media workflows kunye nokunceda ukulawula iindleko zokugcina
izenzekele Avid®NeAdobe®Ukugcinwa kweprojekthi kunye nokugcinwa kwirekhodi
I-LTO entsha ye-LTO ihambelana kwaye ibuyisela ngokukhawuleza imisebenzi yokubuyiselaInikwe amandla ngumlingani wezobuchwepheshe,IMOG Technologies
DNAevolution Infinity Series,I-software ye-LTO LTFS ehlanganisiweyo kunye nesisombululo se-hardware kwi-media archiving and data management
Facilis Kunye ne-StorageDNA apho kuboniswa khona ukuhlanganiswa kokugcinwa okwabelwanayo kunye ne-LTO LTFS ubuchwephesha bokugcinwa kwendawo yezobugcisa. I-StorageDNA Evolution ye-LTO LTFS iteknoloji igxininisa ukugcinwa kwempahla kunye nokugcinwa kwempahla ye-asethi kwaye inikezela ngemisebenzi ye-mediaflows ephakamileyo esuka kwi-TO tape.
I-SGL ibonise intsha entsha ye-FlashNet kwi-NAB 2017. I nkampani ibonise inkxaso yayo yokugcinwa kwamafu e-Amazon, i-S3-based based storage-based based archiving and cloud SonyISp Media Cloud Platform. Ubuhlobo obusondeleyo be-SGL kunye neenkampani zenkwenkwezi zefu zibonelela ngoshishino lwamajelo ngemisebenzi emitsha kunye nezixhobo ezinamandla. Oku akugcini nje ukuqinisekisa ukuba impahla iyakuthunyelwa kwindawo efanelekileyo kodwa ibuye ibuyise indlela yabasasazo ukulawula iindleko zokugcina ngokusebenzisa ixabiso lokugcina nokufumana ixabiso kwi-efayili.
I-Spectra Logics 'I-BlackPearl Converged System System inika indlela yokulondoloza idijithali ngokudibanisa i-NAS kunye ne-S3-based interfaces kunye neethagethi ezininzi zokugcina kwisisombululo esisodwa. Eyilungiselelwe amaninzi asebenzayo, i-BlackPearl iyanciphisa imfuneko yokudityaniswa kwemodare yenkampani yesithathu ngokudibanisa i-Spectra S3-based interfaces kunye neentlobo zabaxumi abaqinisekisiweyo kunye nabafaki befayile abalula.
I-Spectra BlackPearl Eon Browser inikeza isikhombisi esibonakalayo esibonisa ukuba abathengi bakwazi ukuhambisa kalula idatha kwiikhomputha enkulu okanye kwisabelo senethiwekhi kwisango le-BlackPearl, kwaye ukukopisha idatha kwiikhomputha enkulu ukusuka kwipango. Idata elidluliselwe kwisango liyakwazi ukudluliselwa kwi-tape okanye kwi-disk-based storage, eyenza lula ukuhanjiswa kwedatha.
I-DDN yayigxininisa amandla ayo okugcina izinto e-WOS kubandakanyekile ukukhuselwa kwedatha kwayo entsha kunye ne-S3 ezininzi zonxibelelwano zamanxeba ezithintela iindleko zokugcina izinto kunye ne-disk iindleko zokulondoloza kunye nokungaphaya kwefayile yoluntu ngokukhawuleza kokuhamba kwedatha nokuthembeka.
Injongo eyongezelelweyoIsiqinisekiso sandisa ukhetho lomthengi iindlela zokukhusela, ukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhusela idatha. Iindleko ze-WOS eziphantsi kweendleko zenza iindleko zokugcina izinto ezikhuphisanayo kunye nezinye iindlela zokugcina izinto. Kwakhona kwandisa amaxesha okuvuselela ngokukhawuleza okunciphisa umngcipheko wokulahlekelwa kwedatha ngexesha lokwakha kwakhona nokuphelisa okanye ukunciphisa impembelelo yokusebenza kwephulo lokuqhuba.
Ukugcinwa kweenkcukacha kukugcina kwiphepha leendaba eziphathekayo. Ingqolowa yanamhlanje idla ngokuba "i-archives esebenzayo" esebenzayo njengeencwadi zamathala eencwadi ukwenzela ukuxhasa ukufikelela kokuqukethwe nokuhanjiswa. Ezi zigcinwe zigcinwe ngaphezu kwephepha lokugcina elikhuselekileyo. Banika idatha nge latency ephezulu kunezinye izisombululo zokugcina kodwa ngexabiso eliphantsi lokugcina. Ngomlinganiselo owandisiweyo weendaba eziphathekayo ezisetyenziswe kwiiprojekthi zevidiyo zanamhlanje, ezi zinto zigcinwe zikhulile kwaye zifuna ukuxhasa iipatheni zokufikelela.
 Isitoreji se-2016 Digital kwi-Media and Entertainment Survey, iCoughlin Associates. Www.tomcoughlin.com
UTom. M. Coughlin, uMongameli, uCoughlin Associates ngumhlalutyi ogcinwa ngokubanzi kunye nocebisi. Uneminyaka engaphezu kwe-30 kwimveliso yokugcina idatha. UDkt Coughlin unemifanekiso eninzi kunye neetyala elithandathu kwi-credit. UTom naye ungumbhali we Isitoreji seDijithali kwiiMveliso zeMveliso: i-Essential Guide, Epapashwe nguNew Press. UTom ushicilela Incwadana yeTeknoloji yeTeknoloji yeDoloji, iSitoreji seDigrikhi kwiMidiya, Nezinye i ingxelo.
UTom usebenza nge-SNIA, SMPTE, IEEE, kunye neminye imibutho yobungcali. USihlalo wezeMfundo kwi-SNIA yoLondolozo lweSizwe soLondolozo lweNdawo. UnguSihlalo weZikhokelo zeKamva ze-IEEE Society Consumer Electronics kunye noMlawuli we-IEEE kwisiXeko se-6. Uyilungu elide elide le-CE Society BoG kwaye wayenguMongameli weMisebenzi iminyaka emithathu. UTom nguye umsekeli kunye nomququzeleli weNkomfa yoLondolozo lweeNkcazo zeNgcaciso kunye neNkomfa yoLondolozo loLondolozo. Ungumongameli jikelele weNgqungquthela yeSikhumbuzo seNyaka. Okunye kuTom kwi: Www.tomcoughlin.com
Izithuba ezandwendwe nguTomas Coughlin (ndinibone nonke)
Iingxelo zoLondolozo kwi-2017 NAB Show - Juni 16, 2017
I-WDC yeSigqeba sokuKhumela i-Keynote kwiNkcazo yokuHlalwa kweeNkcukacha zeDivamenti kwiNgqungquthela yokuLondolozwa kwe - Meyi 17, 2016
I-2016 Imiboniso Yokugcinwa Kwenkomfa Inkcazo Ukuhanjiswa kokugqibela nguSeptemba 14 - Septemba 1, 2015
2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa iindaba Izabelo zokuBasa Umagazini we-Beat Broadcast KwiNkomfa yabasasazo KwiNkomfa yoSasazo NAB 2015 NAB 2016 NAB Bonisa NAB Bonisa i-2016 Nab ubonisa imisebenzi NAB Bonisa i Las Vegas NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 Nabshow Umbutho kaZwelonke woLwazi lwabasasazo Ihlabathi loPhuhliso lweZithuba Sprockit Inkundla ye-Ultra HD	2017-06-16
Previous: I-ASG ihlamba i-Tom Menrath ukuqinisa iiNkcazo zomsindo
next: Umncedisi we-Ofisi-jack yazo zonke izinto
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "Uvimba we-Archiving Solutions kwi-2017 NAB Show". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/archiving-solutions-at-the-2017-nab-show/. Enkosi.